Rasmi:-Cabdi Casiis Homey Oo Ku Laabtay Kooxdiisa Hore Elman?
Sunday, May 27th, 2018 - 12:53:10
Saturday June 24, 2017 - 11:05:01 in Wararka by Kubad Bile
29-December-2015:-ayay aheyd markii kooxda Dekedda ayaa soo qaadatay laacibkii hore xulka qaranka Soomaliy kooxaha Elman iyo kooxda Saxafi,isagoo ku sugnaa mudo sanad iyo afar bil ah,ka hor intii uusan ku soo biirin kooxda Dekedda xagaagii 2015-2016 kooxda Saxafi ayuu qeyb ka ahaa,isagoo Saxafi xagaagaas u dhaliyay 2-gool.
Xirfadyahan C/Casiis homeey waayihiisa ciyaareed ee kooxda Dekedda waxa uuciyaaray 34-kulan oo ka tirsan tartamada kala duwan ee dalka tan iyo xagaagii 2015.
Cabdi Casiis homey 30-kulan ayuu ciyaaray horyaalka Soomaliya 18-kulan waxa uu ciyaaray xagaagii 2015-2016,halka xagaagan 2016-2017 uu u ciyaaray 12-kulan,balse xagaagii 2015-206 waxa ay kooxdiisa Dekedda ku dhameysatay booska 2-aad ee horyaalka waxa ay keensatay 36-dhibcood waxa ay badisay 10-kulan waxa ay qasaartay 2-kulan,halka barbaro ay gashay 6-kulan.
Laacibkan ka ciyaara weerarka iyo garabaha ayaa kooxdiisa hore Dekedda u dhaliyay 7-gool oo ka tisran tartamada,6-gool waxa uu ka dhaliyay horyaalka Soomaliya tan iyo xagaagii 2015,halka goolka kale uu dhaliyay koobka koobka Janeraal Daa’uud 2015-2016.
Cabdi Casiis Homey ayaa goolasha ka kala dhaliyay kooxaha Banaadir SC,Jeenyo,Horseed,Singjet iyo Waxool.
10-04-2017:-Cabdi Casiis Hoomeey Oo Xaqiijiyay in Ka Tagay Kooxda Dekadda.
Wararkii ugu dambeeyay bartamaha bisha May ee soo gaaray Qalinle Sport ayaa lagu cadeeyay in Cabdi Casiis Maxamed Cali iska tagay kooxdiisii hore Dekedda.
Hoomey, ayaa xirfadiisa ciyaareed kusoo bilaabbay naadiga Dekadda, markii uu ka tagay waxa uu u soo dheellay kooxaha Elman iyo Saxafi, dib ayuuna ugu soo laabtay Dekadda,isagoo markale qaatay in uu ka dhaqaaqo.
"Waxaan soo gabogabeeyay mustaqbalkeyga ciyaareed ee kooxda Dekadda, oo aan joogay mudo sanad ka badan,waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo dhammaan ciyaartooyda kooxda.”
"tan iyo bishii May ma anaan qaadan wax go’aan,balse 22-June ayaan ku biiray kooxdaydii hore Elman waan ciyaaridoonaan afarta kulan ee u hartay kooxdayda horyaalka Soomaliya waxa aan rajaynaa in aan la qaato waqti muhiim iyo koobab badan waxaanse isku diyaarinaa xagaaga soo aadan maadama uu hada xili ciyaareedka dhamaad yahay Cabdicasiis Maxamed Cali ‘Hoomeey’ ayaa sidaas u sheegay Qalinle Sports”.
Cabdicasiis, ayaa ka mid ah xiddigaha ugu orodka badan horyaalka Soomaaliya, waana sababta ay ugu baxday Hoomeey,xili ay kooxdiisa Elman ay fadhiso booska 2-aad waxayna lee dahay 28-dhibcood.